BUSH ESCAPE kufutshane kakhulu eSydney okanye incwadi ethi RETREAT - I-Airbnb
BUSH ESCAPE kufutshane kakhulu eSydney okanye incwadi ethi RETREAT
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguMonique
I-Gemden Lodge Bush Escape, indawo efanelekileyo yokuya kwimpelaveki yokuphumla kude. Indawo yoxolo kunye nokuzola okugqibeleleyo. Ukuphuncuka kwehlathi lokwenyani, kodwa kufutshane nesixeko. Vuka kwizinto ezibonwayo kunye nezandi zezityalo kunye nefauna kwaye wabelane ngesidlo sakho sakusasa kunye namahashe. Iikhabhinethi zethu ezisanda kwakhiwa zinika indawo yokuhlala etofo-tofo, yale mihla, ebekwe kwindawo yabucala yeehektare ezingama-52, iyure enye ukusuka eSydney, i-10mins ukusuka kwidolophu yembali yasePicton kunye nesango eliya kwiiNduli zaseMazantsi.
Unokwenza okuncinci okanye okuninzi njengoko uthanda. Relax kwidekhi enomthunzi. Bukela amahashe esidla. Funda incwadi okanye ujabulele i-bushwalk. Nguwe ophetheyo. Yiya ngaphandle kwindlela yesango lefama yendawo okanye uhlolisise kunye nesidlo sasemini ePicton. Mhlawumbi ungathanda ukuqhubela ilizwe ukutyelela iZidiliya ezikhazimlayo zaseMazantsi eeHighlands. Emva kwemini, galela isiselo, uvule iingoma ezithile uze ubukele njengoko iikhangaru kunye neewallabies ziphuma zisiya kudliswa kwangethuba. Yitshise i-BBQ kwaye ugqatse ilanga emva kwemini. Kungekudala uya kuthakathwa kukutshona kwelanga okuzukileyo, ukuvela kancinci kweenkwenkwezi ezisisigidi kunye nobumnandi obutofotofo bomlilo odangazelayo enkampini.
Ukuba yidetox yedijithali oyifunayo, phumla, akukho wifi okanye tv. Ezinye iindwendwe zikhetha ukuhlala zinxibelelana ngezixhobo zazo. Ifowuni ephathwayo ayilunganga, ngoko kuyacetyiswa ukuba ukhuphele umculo kunye neemuvi phambi kokufika.
Sinekhabhathi ezimbini kwipropathi yethu, zombini iikhabhini zikumacala ahlukeneyo epropathi, ngoko zihlala zibucala kakhulu. Cela abahlobo bakho ukuba babhukishe ikhabhinethi yethu yaseBush Retreat kwaye bayenze ibe yindawo yokubaleka yeqela.
Sihlala kwipropathi, nangona kunjalo indawo yethu yokuhlala ayinakubonwa kwikhabhinethi. Ukhululekile ukuba unandiphe ukuba wedwa ngoxolo. Sinoqhagamshelwano nawe kuphela xa kukho into oyifunayo; kungenjalo siyakushiya uyonwabele ukuhlala kwakho.
Njengeendwendwe zethu, uya kuba nokufikelela okukodwa kwikhabhinethi kunye neendawo ezijikelezileyo kwaye uzive ukhululekile ukujonga yonke ipropathi yethu. Izinja zakho zamkelekile (imvume yangaphambili iyafuneka xa ubhukisha). Izinja kufuneka ziziphathe kakuhle kwaye zibe nobudlelwane nabantu kunye nezinye izinja. Nceda uqaphele ukuba ipropathi ayibiyelwanga ngokupheleleyo, ngoko ke inja yokukhokela iyanikezelwa. Ukuba uyaphuma, ungakhetha ukuyishiya inja yakho kwindawo yethu ekhuselekileyo yekennel, ekufutshane neloji enkulu.
Amahashe amkelekile (imvume yangaphambili xa ubhukisha), ngentlawulo eyongezelelweyo ye-15 yeedola ngobusuku, ngehashe ngalinye. Ihashe lakho liya kuba kwi-paddock kanye phambi kwendawo yakho yokuhlala. Kuyafuneka ukuba unikeze konke ukutya. Uya kuba nokufikelela kwibala lethu lesanti, iyadi engqukuva kunye neendlela zokukhwela. (uyekelo kufuneka lusayinwe phambi kokuba kukhululwe amahashe).
Zonke izibonelelo zelinen kunye ne-basic pantry zibonelele ngomatshini wekofu we-pod, iketile, i-toaster, i-top stove top, ifriji kunye ne-BBQ enikeziweyo.
Sihlala kwipropathi, nangona kunjalo indawo yethu yokuhlala ayinakubonwa kwikhabhinethi. Ukhululekile ukuba unandiphe ukuba wedwa ngoxolo. Sinoqhagamshelwano nawe kuphela xa kukho…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-23033
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lakesland